गायिका प्रविशा अधिकारीले गरिन् विवाह, के गर्छन् उनका श्रीमान् ? | Butwal Dainik
गायिका प्रविशा अधिकारीले गरिन् विवाह, के गर्छन् उनका श्रीमान् ?
काठमाडौं :- गायिका प्रविशा अधिकारी वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी छन् । पछिल्लो समय ‘द भ्वाइस किड्स २०२१’ कि कोच रहेकी प्रविशाको आइतबार विवाह भएको छ । उनले प्रेमी निर्माण सिटौलासँग विवाह गरेकी हुन् । उनीहरुको गएको बिहीबार इंगजमेन्ट भएको थियो ।
निर्माण लामो समयदेखि अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्दै आएका थिए । पेसाले उनी इन्जिनियर हुन् ।